UXiaomi udlula uFitbit no-Apple futhi usevele ungumkhiqizi wokuqala wezingubo zokugqoka emhlabeni | Izindaba zamagajethi
UXiaomi udlula uFitbit no-Apple futhi usevele ungumkhiqizi wokuqala wezingubo zokugqoka emhlabeni
UJoseph Alfocea | | Amadivayisi agqokekayo, Izaziso
Isiqhwaga saseChina uXiaomi siyaqhubeka nokukhula ngaphakathi nangaphandle kwezwe laso. Kangangokuthi ngokokuqala ngqa, idlule i-Apple neFitbit futhi isibe umkhiqizi omkhulu kunabo bonke emhlabeni wamadivayisi agqokekayo.
Lokhu kuvezwa ngumbiko owenziwe yinkampani yokuhlaziya i-Strategy Analytics lapho kukhonjiswa khona ukucindezela kukaXiaomi, ngasikhathi sinye Ukuthengiswa kwedivayisi ye-Fitbit kwehle ngamaphesenti angama-40 ngekota yesibili yonyaka wezi-2017.
1 UXiaomi uyaqhubeka nokuphakama kwakhe
2 Izinhlobo ezimbili ziyanda, izindlela ezimbili zokuqonda umkhakha
3 Ikusasa eliseduze leXiaomi ne-Apple
UXiaomi uyaqhubeka nokuphakama kwakhe
Ngokusho kokugcina ukutadisha ilungiselelwe yi-Strategy Analytics, UXiaomi ukwazile ukudlula i-Apple neFitbit ngaleyo ndlela abe ngumthengisi omkhulu kunabo bonke wezinto ezingagqokwa emhlabeni. Ngokwalo mbiko, inkampani yaseChina ngabe ngathengisa amayunithi ayisigidi esingu-3,7 ngekota yesibili yowezi-2017, kuqhathaniswa nezigidi ezingama-3,4 zikaFitbit kanye ne-Apple engu-2,8 million ngesikhathi esifanayo, noma ngabe iqiniso i-Apple belizobhekana nokukhula okuhlobene kakhulu kunenkampani yaseChina. Ngaphandle kwale mikhiqizo emithathu, kunamanye amadivayisi agqokekayo ayizigidi eziyi-11,7 athengiswe ngekota yesibili ka-2017, okulingana namaphesenti angama-54 esewonke.
Ngokwamaphesenti, bobabili uXiaomi no-Apple babone ukukhula minyaka yonke, ebhekene nokuwa kweFitbit. Ngalo mqondo, ngenkathi iXiaomi isukile emaphesentini ayi-15 yaya kwayi-17, i-Apple ikhule isuka ku-9 yaya kumaphesenti ayi-13, okungukuthi, amaphuzu amaphesenti amabili ngaphezulu kwenkampani yaseChina. Ngokuphambene nalokho, uFitbit ushiye isabelo semakethe samaphesenti ayi-13, sisuka emaphesentini angama-26 ngonyaka owedlule saya kumaphesenti ayi-16 aqeda ngawo ikota yesibili yonyaka we-2017.
Ukuthunyelwa kwamadivayisi okugqokekayo ngabakhiqizi ngekota yesibili ka-2017 emhlabeni jikelele (ezigidini zamayunithi) | UMTHOMBO: Ama-Analytics Wamasu
Izinhlobo ezimbili ziyanda, izindlela ezimbili zokuqonda umkhakha
Kuyamangaza lokho amafemu amabili akhule esigabeni sokugqokwa, i-Apple neXiaomi, anikela ngezindlela ezahlukahlukene kulo mkhakha. Ngokwengxenye yayo, iXiaomi inezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo egqokekayo noma egqokekayo ngamanani aphansi kakhulu afaka phakathi izinzwa zokushaya kwenhliziyo nezinye izici nemisebenzi (sonke siyayazi iMi Band isizukulwane sesibili kungenzeka ukuthenga eSpain ngenani lama-25-30 euros). Ngokuphambene nalokho, i-Apple ine-Apple Watch kuphela, i-smartwatch enendlela ecacile ye-premium nokuningi okuphelele ngokuya ngemisebenzi nezici futhi imodeli yayo eshibhe iqala ngo- € 369. Ngakho-ke, kungashiwo ukuthi zombili izinkampani zimelela ukweqisa okubili kwemakethe, kanti isikhundla sikaFitbit singaba phakathi kokunye.
UNeil Mawston, ovela enkampanini ebhekele lolu cwaningo, i-Strategy Analytics, ukuvezile lokho okwamanje UFitbit ubeka engcupheni yokunqotshwa okuqambe njenge "ukunyakaza kwe-pincer" phakathi kwama-smartbands ashibhile athengiswa yi-Xiaomi, nama-smartwatches ebanga eliphambili aklanywe yi-Apple.
Ikusasa eliseduze leXiaomi ne-Apple
Ngemuva kweminyaka embalwa edumazayo lapho uXiaomi azame, ngaphandle kwempumelelo enkulu, ukugcina ukukhula okuqhumayo kokuqala kwayo, umfutho wokudayisa eChina, kuhambisana nentuthuko yawo eNdiya (izimakethe ezimbili ezinkulu kakhulu emhlabeni) lapho inkampani yathola khona imali eyizigidi eziyizinkulungwane ngonyaka odlule, ifake lo mkhiqizo ethembeni, kangangoba umphathi wayo, uLes Jun, ukhuluma "ngenguquko enkulu ekukhuleni kwayo."
Futhi uma kukhulunywa nge-Apple, i-Strategy Analytics iphawula ukuthi amahemuhemu okuthi isizukulwane esilandelayo se-Apple Watch singafaka ukuthuthuka okuphawulekayo endleleni yakho yokuqapha impilo, ingasebenza njengesikhuthazo ku-Apple ukuthola kabusha indawo ephezulu. Kodwa-ke, okwamanje, inkampani ehlaziya iveza ukuthi yikho kanye lokhu kushoda kwezinketho zokuqapha ezempilo ezizuzisa nokugcina iXiaomi, okwenza abasebenzisi abaningi bakhethe izinketho zayo ezingabizi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Amadivayisi agqokekayo » UXiaomi udlula uFitbit no-Apple futhi usevele ungumkhiqizi wokuqala wezingubo zokugqoka emhlabeni
I-Samsung Leader 8, iselula esongekayo enezici ezisezingeni eliphakeme
IVolocopter, itekisi lekusasa lapho uDaimler atshale khona imali